Ọ bụ nkịta
Ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla n'ime anyị nwere anụ ụlọ n'ụlọ, na nchedo ahụike ya weere dị ka otu n'ime nchegbu na ọrụ dị mkpa nke onye. N'ụzọ dị mwute, anụ ụlọ anyị na-arịa ọrịa mgbe ụfọdụ. N'ime ìgwè ihe ize ndụ, ụmụ anụmanụ ndị na-aga n'okporo ámá na-ada. Otu n'ime ọrịa "mpụga" kachasị "anụ ahụ" nke ụmụ anụmanụ bụ ụyọkọ anụ. Tupu ị na-emeso ụbụrụ na ụmụ anụmanụ, ị kwesịrị ịma ihe ọrịa ahụ bụ.
Ọkpụkpụ mgbatị bụ ọrịa na-efe efe na-efe efe nke na-ejikọta na mmebi nke ụrọ nke otu akụkụ nke akpụkpọ ahụ ma na-eji ntutu isi, nchacha na akpụkpọ anụ. Ndị na-emepụta ihe na-eme ka Microsporum microscopic fungi. Ha na-eme ka akpụkpọ anụ ahụ na akpụkpọ anụ ahụ gbasaa. Oge nkwụsị nke ụbụrụ na-emekarị bụ 5-15 ụbọchị.
Kedu ka nkịta na nkịta si yie?
Ịgba nkịta site na nkịta na-egosi na ọ bụ site na kọntaktị na akpụkpọ anụ ahụ ka ọ na-ejikọta ya na ụgbọelu ahụ. Ka oge na-aga, ero na-eto na epidermis, ntutu isi na ntutu isi - usoro mkpali na-amalite. E nwere ọgba aghara n'ihe oriri na-edozi ahụ, bụ nke ntutu isi na-amalite ịda. Na akpụkpọ ahụ, a na-emepụta eriri ahụ na, n'ihi ya, a na-emepụta ntụpọ ntụpọ na esemokwu doro anya.
Ebe kachasị amasị ebe a bụ isi, ntị, isi nke ọdụ ma ọ bụ akụkụ ala ala.
Mgbaàmà nke Ringworm na Nkịta
Ka ị ghara ịmalite ọrịa ahụ, onye ọ bụla kwesịrị ileba anya na ahụike nke anụ ụlọ ahụ ma lekọta ya nke ọma. Trichophytosis (aha ọzọ maka ọrịa ahụ) na-egosipụtakarị dị ka ndị a: ọkụ ọkụ a na-ahụ anya na-egosi n'ógbè ahụ metụtara, mgbe ahụ ọnyá ahụ na-arịwanye elu, eriri ọbara ọbara dị na akpụkpọ na ajị anụ dara. N'okpuru eriri ahụ nwere ike ịfe.
Ikekwe, ihe mgbaàmà ndị a apụtaghị na anụ ahụ na-agbazi anụ. Ntutu isi na-ahụ maka ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe mgbaàmà nile dị n'elu n'elu nkịta, mgbe ahụ, ihe gbasara o nwere ike inweta trichophytosis bụ 99%.
Mgbe ụfọdụ, ero nwere ike imezi nke ọma na onye ọbịa ahụ na ọ gaghị apụta ọbụna n'ụzọ ọ bụla. Ma nkịta ga-ebute ọrịa ahụ ma nwee ike imerụ ụmụ anụmanụ ma ọ bụ ụmụ anụmanụ ọzọ.
Egwurugwu na nkịta: ọgwụgwọ
A ga-etinye nyocha ọ bụla nke ọma nke anụ ụlọ gị na ụlọ ọgwụ anụmanụ. Ọ ga-ezuru iji nweta ọtụtụ ule. Ọ ka mma ịghara itinye aka na nkịta nke nkịta, n'ihi na anụ ahụ nwere ike ghara ịgwọ ọrịa, ma ndị òtù ezinụlọ, karịsịa ụmụ, ga-ebute ọrịa.
Otu esi emeso ogwu na nkịta, ị ga-akọwa onye ọ bụla na-agwọ ọrịa, ma ị nwere ike iji ndụmọdụ anyị.
Gburugburu ero ahụ, belata ajị ahụ niile site na 1.5 -2 cm. Ebe ọ bụ na usoro a ka ị na-eme onwe gị, na-agbaso nlezianya niile ka pathogen ghara ịbanye na akpụkpọ ahụ. Gaa anụ anụ ahụ na mmanụ mycozolone ma ọ bụ clotrimazole. E kwesịrị ime usoro ahụ ugboro 2-3 n'ụbọchị. Ọ ka dị irè karị iji kpochapụ akụkụ ahụ emetụtara na ngwọta 10% nke salicylic acid na ayodiin ugboro abụọ n'ụbọchị. Ekwela ka nkịta kụọ ọgwụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ amalitela, a na-enye anụmanụ ọgwụ ọgwụ. Ihe kacha dị irè ụzọ iji luso trichophytosis bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. A na-ewere "Polivak-TM" na "Mentawak" dịka ọgwụ ndị dị irè. Ọ dị mma na ogwu "Vakderm". Gwa ogwu ogwu na anu n'ulo, usoro a kwesiri inye onye oru ogwu. Ọtụtụ mgbe a na-eme ịgba ọgwụ mgbochi ugboro abụọ na nkeji izu abụọ.
Mgbe nkịta na-arịa ọrịa na ụbụrụ, ọ ka mma idobe ya maka oge ọgwụgwọ ma saa ebe niile na ịcha ọcha. Na nkịta nwere nkwenye siri ike, enweghi ohere ịnweta ọrịa. Iji nọgide na-egbochi nkịta, ị kwesịrị ịzụ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Kedu otu esi amata ọdịiche dị n'ụgbọ atụrụ site na nwa agbọghọ?
Ihe ị ga-eri hamster dzhungar - anyị na-eme menu n'ụzọ ziri ezi
Polyurethane maka nkịta
Ụdị nkịta dị mkpụmkpụ
Nlekọta na ọzụzụ nke Newfoundland
Ivermek maka nwamba
Ụmụaka nke East European Shepherd Dog
Otu esi achọpụta ihe gbasara ọdịiche dị iche iche na ụdị anụ ọhịa
Kedu ka esi asa mmiri akwa?
Kedu otu esi akpọ nwa agbọghọ nkịta?
Kedu ihe iji nye nkịta ahụ site na afọ ọsịsa?
Na-akwadebe aṅụ maka oyi
Sheltie - nkọwa nke ụdị
Ejiri uwe - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi dị mma?
Mkpụrụ ọgwụ na-eme ka pasent
Gịnị ga-esi na Germany?
Chicken na oven - kacha mma ntụziaka maka ọtụtụ ụtọ ulo ozuzu okuko efere
Chicken minced anụ - calories
Kedu ụdị strawberry bụ sweetest na kasị ukwuu?
Omumahka mara mma - uzommeputa
Gịnị mere ndị inyom ji achọ ịlụ?
Ndị ikwu Michael Schumacher emeghewo ibe na netwọk mmekọrịta, raara onwe ha nye onye na-agba ya
Utu ududo - ihe ọ pụtara
Ọnụ ụzọ ndị dị n'ime ime ọnụ na-eji aka ha eme ihe
Ihe Ndị Na-ahụ Maka Ụmụaka
Prunes - ọdịnaya calorie
Ndị inyom kachasị mma nke ụwa 2013
Skewers nke ham
Kedu esi eme ụlọ ime akwa n'ime ụlọ?
Vastu Shastra n'ime ulo
Kedu ka esi tufuo ntụpọ uhie na ụkwụ gị?
Kedu ka esi mee onye na-enweghị nchefu?
Jennifer Aniston kpebiri ịhapụ di ya Justin Teru
Nri ude - ihe ntanetị nke zuru ụwa ọnụ na nke siri ike